अमेजन अलेक्सा - स्मार्टमे
डोम » Amazon एलेक्सा
अमेजन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन स्टोर मात्र होईन। यो पनि विशाल स्मार्ट होम वर्ल्ड हो जसमा तपाईले आवाज नियन्त्रण गर्न अलेक्सा पठाउनुहुनेछ! हामीलाई पछ्याउनुहोस् संसारमा यो सबैभन्दा बुद्धिमान सहायक के गर्छ।
अमेजन कृत्रिम बुद्धिमत्ताको साथ ड्राइभर नियन्त्रण गर्दछ
ai, अमेजन, कृत्रिम बुद्धि
अमेजनले आफ्ना चालकहरूलाई कृत्रिम बुद्धिमताका साथ अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ। सबै मानिन्छ कि कर्मचारी माथि पूरा नियन्त्रण छैन, तर एक राम्रो कारणका लागि। अमेजनले कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ अमेजन ड्राइभरहरू फारममा हस्ताक्षर गर्न बाध्य छन् ...
Amazon एलेक्सा, Apple HomeKit, गुगल गृह, समीक्षा
Yeelight V1 Pro डेस्क दीपक - काम र आरामको लागि राम्रो प्रकाश
homekit, टेबल बत्ति, yeelight
चाखलाग्दो डिजाइन, राम्रो प्रकाश र प्रयोगको सजिलो। यो Yeelight V1 प्रो डेस्क दीपक हो। स्मार्ट उपकरणहरू जसले निश्चित रूपमा कामको आरामलाई सुधार गर्दछ वा साँझमा पुस्तकहरू पढ्ने बनाउँदछन् धेरै रमाइलो ... येललाईट पहिले नै प्रसिद्ध भइसकेको छ ...
अमेजन घर रोबोटमा काम गर्दैछ!
इन्टरनेटमा लामो समयदेखि यो हल्ला चलिरहेको छ कि अमेजन एक बुद्धिमान होम रोबोटको लागि काम गर्दै छ "वर्स्ता" नामको काममा। यद्यपि नयाँ जानकारी लीकले रोबोटको निर्माणलाई प्रश्नमा ल्यायो। अधिक तल! हुनेछ वा छैन ...
वाईफाईको साथ Meross बगैचा सकेट! समीक्षा
बगैचा सकेट, स्मार्ट सकेट, meras
अहिलेसम्म, प्रत्येक पटक मैले केहि लामो समय सम्म बाल्कनीमा जडान गर्न आवश्यक परे, मैले कडा विचार गर्नुपर्‍यो। चिपकने टेप (धेरै चिपकने वाला टेप) चालमा थियो, र स्वास्थ्य र सुरक्षा नियमहरू भारी तनावपूर्ण थिए। अन्त मा, तथापि, म मिल्यो ...
मेरोस लाइट स्विच - सहायकहरूको लागि उत्तम स्विचको समीक्षा
Amazon एलेक्सा, Apple HomeKit, google home, homekit, meras, प्रकाश स्विच
विरलै मसँग छ कि उपकरणहरू मैले प्राप्त गरेका सबै आधारभूत सहायकहरूसँग राम्रोसँग काम गर्दछन्। मेरोसले मलाई यससँग आश्चर्यचकित गर्यो। यो स्विचमा हेर्दै, म केवल होमकिटको बारेमा सोच्दै थिएँ, र यस्तो भयो कि यसले राम्रोसँग काम गर्दछ ...
नयाँ सुविधाहरूको साथ एलेक्सा!
Alexa, अमेजन, समाचार
प्रविधि अत्यन्त चाखलाग्दो दिशामा विकास भइरहेको छ। साइ-फाइ चलचित्रका धेरै थ्रेडहरू पहिले नै वास्तविकतामा छन्, यो कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट बाहिर जान्छ - एलेक्सा पारिवारिक डाक्टरको रूपमा त्यस्तो अर्को केस हो! एलेक्साले तपाईंलाई सत्य कुरा भन्नेछ! कम्पनीको स्मार्ट रिस्टब्यान्ड ...